Snoop Dogg wuxuu sharad sare ku galay bilawga xashiishada xashiishada Jarmalka ee Cansativa • Drugs Inc.eu
Bogga ugu weyn cannabis Snoop Dogg wuxuu si weyn u sharxayaa xashiishadda Jarmalka ee Cansativa
Snoop Dogg wuxuu si weyn u sharxayaa xashiishadda Jarmalka ee Cansativa
albaabka Ties Inc. February 22 2022
maqaal by Ties Inc. February 22 2022
Casa Verde waxay ku maalgelisay $ 15 milyan Cansativa, oo ah xarun qaybinta xashiishadda ee Frankfurt, Argonautic Ventures iyo Alluti oo fadhigeedu yahay Munich ayaa sidoo kale ku biiray wareega maalgashiga.
1 Sharciyeyn ayaa soo socota
2 Fursadaha suuqa
3 Sawirka Yurub
4 Xarunta bakhaarka Cansativa
Waa maalgelintii ugu waynayd ee kooxda Snoop Dogg iyo shirkadiisa Casa Verde ay sameeyeen ilaa maanta. La yaab maaha in lacagtaasi ay aado Jarmalka. Xukuumadda cusub ee isbahaysiga ee dalka, oo ay sameeyeen xisbiga bidix ee Social Democrats iyo Free Democratic Party, ayaa ballan qaaday in ay sharciyeynayaan isticmaalka xashiishadda madadaalada muddo afar sano gudahood ah.
Sharciyeyn ayaa soo socota
sharciyeynta xashiishadda madadaalada waxay siin doontaa qaybta xashiishadda ee Jarmalka kobcin weyn. Jarmalku waa kan ugu weyn Yurub marka ay timaado isticmaalka caafimaadka cannabis† Waa mid ka mid ah dhawr waddan oo ay bukaannadu ka heli karaan xashiishad daawo bilaash ah. Jarmalka ayaa la filayaa in ay ku xisaabtamaan in ka badan kala bar isticmaalka xashiishadda caafimaadka ee Yurub marka la gaaro 2024.
Waxaa la aasaasay 2017, Cansativa waxay horeyba u haysataa boos xooggan suuqa. Bilawga - kaas oo isu magacaabay 'Amazon of cannabis' - wuxuu awood u siinayaa farmashiyeyaasha Jarmalka inay si fudud u iibsadaan xashiishadda cannabis, iyagoo habaynaya silsiladda saadka iyo saadka.
Marka xashiishadda madadaalada la sharciyeeyo, Cansativa waxay sidoo kale u isticmaali kartaa goobteeda suuqa madadaalada. Wareegga cusub ee maalgelinta waxaa loo isticmaali doonaa in lagu xoojiyo wax soo saarka shirkadda iyo kooxaha injineernimada software iyadoo la filayo fursadda suuqa cusub, ayuu yiri la-aasaasaha iyo maamulaha Jakob Sons.
"Waxa ugu muhiimsan waa in la hagaajiyo nidaamkayaga B2B ee hadda jira oo aan u beddelno badeecad tignoolajiyadeed la cabbiri karo oo buuxin doonta dhammaan shuruudahaas koritaanka mustaqbalka ee caafimaadka iyo gaar ahaan nidaamka deegaanka madadaalada," ayuu u sheegay Sifted.
Cansativa waxay sheegtay in qiyaastii 15 tan oo xashiishad dawo ah hadda lagu isticmaalo Jarmalka sannadkii, laakiin waxay ku qiyaastay in suuqa madadaalada uu kori doono 200 oo tan laba sano gudahood ee sharciyeynta.
Sannadkii hore, shirkaddu waxay ku guulaysatay heshiis afar sano ah oo gaar ah oo ay la gashay maamulaha Jarmalka, taas oo ka dhigaysa shirkadda kaliya ee shatiga u leh inay qaybiso xashiishadda gudaha.
Ka hor ku dhawaaqista maalgelinta, lammaanaha Casa Verde Yoni Meyer ayaa sheegay in tani ay dhigayso bilawga si ay u noqoto mid ka mid ah ciyaartoyda suuqa: "Cansativa waxay si istiraatiji ah u taagan tahay inay noqoto hormuudka xashiishadda daawada ee dhaqaalaha ugu weyn Yurub. Waxaan ku qanacsanahay in kooxdani ay kaalin dhexe ka ciyaari doonto sharciyeynta la filayo ee Jarmalka oo ay saameyn weyn ku yeelan doonto suuqa Yurub, kaas oo la filayo inuu gaaro $ 2025 bilyan 3,6."
Jarmalku ma noqon doono waddankii ugu horreeyay ee Yurub ah ee sharciyeeya xashiishadda (Malta waxay sidaas samaysay dhammaadka 2021), laakiin Sons waxay leedahay waxay inta badan diiradda saari doontaa suuqa guriga: "Waxaan si xooggan diiradda u saaraynaa Jarmalka marka hore , sababtoo ah kani hadda waa suuqa ugu caansan."
Marka lagu daro ka shaqaynta madal qaybinta B2B, Cansativa waxa kale oo ay leedahay meel lagu kaydiyo oo loo isticmaalo in laga keeno xashiishada wadamada kale. Xashiishad la soo dhoofiyo ayaa hadda ah 95% suuqa, iyada oo inta badan ay ka yimaadaan Kanada, Netherlands, Danmark, Portugal iyo Spain.
Xarunta bakhaarka Cansativa
Bakhaarka Cansativa wuxuu ku yaal meel u dhow garoonka diyaaradaha ee Frankfurt. Sons ayaa sheegay in maadaama waddamo badan oo Yurub ah ay xoreeyeen qawaaniinta xashiishadda, uu rajaynayo in xarunta Cansativa ay noqoto xarun u adeegta qaaradda oo dhan.
"Waxaan leenahay kaabayaal dhaqaale oo ku xiga garoonka diyaaradaha ee Frankfurt - waxaan u isticmaali doonaa xaruntayada halkan albaab laga galo Midowga Yurub," ayuu yidhi. Cansativa ayaa sheegtay in ay labanlaabtay dakhligeeda sanad walba tan iyo markii la aasaasay, iyada oo kor u qaadaysa in ka badan 2021 milyan oo Yuuro 10 markii ay horeba faa'iido u lahayd.
Iyadoo shirkadaha Maraykanka iyo Kanada ay horeba u daawanayeen suuqa Jarmalka si xiiso leh, bilawga Frankfurt waxay aaminsan tahay in khibradeeda sharciyeed ay ka dhigi doonto lammaane qaybinta qof kasta oo doonaya inuu iibiyo xashiishadda madadaalada ee dalka.
Akhri wax dheeraad ah sifeeyay.eu (Source, EN)
30ka sare: CBD ugu Fiican Marka loo eego Caafimaadka Ragga
Maxkamadda Sare ee Talyaaniga ayaa xannibtay aftida sharciyeynta xashiishadda
Cilmi baaris lagu sameeyay saameynta ay boqoshaada sixirka ku leedahay...
Cilmi-baaris: Isticmaalka xashiishadda ayaa saameyn yar ku leh awoodaha garashada
Xisbiga Hantiwadaaga Isbaanishka ayaa u codeeyay sharciyeynta sharci…
26 Oktoobar 2021